One Daily Media, Author at ONE DAILY MEDIA
Author: One Daily Media
သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့် celebrity များ
Jun 28, 2022 One Daily Media
သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့် celebrity များ 1. Christian Bale met Dicky Eklund. 2.O’Shea Jackson Jr. met Ice Cube. 3.AnnaSophia Robb…
ဘာကြောင့် ကလေးယူရတာဟာ စုံတွဲတွေအတွက် အခက်ခဲဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ရသလဲ
ဘာကြောင့် ကလေးယူရတာဟာ စုံတွဲတွေအတွက် အခက်ခဲဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ရသလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူသန်း 50 ခန့်က မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ကလေးယူဖို ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ စုံတွဲတွေကို ဘာ‌ေကြာင့် ကလေးယူရတာ ခက်ခဲရတာလဲ…
မေးခွန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ ဦးနှောက်စားစရာ ဓာတ်ပုံများ
မေးခွန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ ဦးနှောက်စားစရာ ဓာတ်ပုံများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်တိုက ကျွန်တော်တို ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ဦးနှောက်ကိုပါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဉာဏ်စမ်းဂိမ်း pazzle ဆက်တာ စတာတွေ ဆော့ကစားပေးလိုရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဦးနှောက်ကို…
အရွယ်ရောက်ပြီးသား အာဝုကြီးတွေ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်နှင့် တွေ့ဆုံတဲ့အခါ
Jun 27, 2022 One Daily Media
Kthayi Myintmo: အရွယ်ရောက်ပြီးသား အာဝုကြီးတွေ သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်နှင့် တွေ့ဆုံတဲ့အခါ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်က Anatole France က “တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို မချစ်မချင်း၊ စိတ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက မနိုးထသေးဘူး။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။…
ဆယ်စုနှစ်ကြာအောင် အချစ်တွေနဲ့ အပန်းဖြေခဲ့ပြီး ပွင့်လန်းလာတဲ့ နာမည်ကျော် လိင်တူစုံတွဲမျာ
Jun 24, 2022 One Daily Media
ဆယ်စုနှစ်ကြာအောင် အချစ်တွေနဲ့ အပန်းဖြေခဲ့ပြီး ပွင့်လန်းလာတဲ့ နာမည်ကျော် လိင်တူစုံတွဲများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရ လိင်တူစုံတွဲတွေဟာ သာမန်စုံတွဲထက် စာရင် ပိုပြီး သံယောဇဉ်ကြီးကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် တစ်ယောက်လိုအပ်ချက် တစ်ယောက် ပိုသိကြလို့ပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့…
အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွေကို ပယ်ချခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်များ
အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွေကို ပယ်ချခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်များ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ယနေ့ခေတ် နာမည်ကြီးတွေက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တင် သူတို့ဘဝကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သူတို့အကြောင်းနဲ့…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာ သိမ်းမထားသင့်တော့တဲ့ ပစ္စည်းများ
Kthayi Myintmo: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာ သိမ်းမထားသင့်တော့တဲ့ ပစ္စည်းများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။အိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွနေတာက စိတ်ဖိစီးကို ပိုဖြစ်စေပြီး စိတ်ရှုပ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံ၊ ထိတွေ့မှုနှင့် အခြားအာရုံတှေကို အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေစေဖို့ ဖိအားပေးနေပါတယ်…
ခရီးအရှည်ကြီး သွားရလို ပျင်းနေတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အာဝု
Jun 22, 2022 One Daily Media
ခရီးအရှည်ကြီး သွားရလို ပျင်းနေတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အာဝု မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာမပါဘဲ ခရီးသွားနေချိန်မှာ အချိန်တွေက ကြာပုံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လန်ဒန်ကနေ Ibiza အထိ ပိုင်ရှင်နှင့်အတူ ခရီးသွားနေတဲ့ ခွေးကလေးတစ်ကောင်က…
ဆုချရလောက်အောင်အထိ ဓာတ်ပုံရိုက်တော်လွန်းကြသည့် မိဘများ
ဆုချရလောက်အောင်အထိ ဓာတ်ပုံရိုက်တော်လွန်းကြသည့် မိဘများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ကလေးတွေ ကြီးလာတာက မြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်၊ မိဘအများစုက ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခိုက်အတန့်ကို ရိုက်ကူးဖိုအတွက် အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တိုပေ့ခ်ျကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်တော်လွန်းကြတဲ့ မိဘတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်။…
သေချာ လုပ်ယူဖန်တီးထားတာ မဟုတ်တဲ့ သမိုင်းဝင်တူညီမှုများ
Jun 20, 2022 One Daily Media
သေချာ လုပ်ယူဖန်တီးထားတာ မဟုတ်တဲ့ သမိုင်းဝင်တူညီမှုများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တိုရဲ့စကြာဝဠာကြီးက အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့် အရင်းအမြစ်အသစ်‌ေတွကို အမြဲတမ်း ယူ‌ေဆာင်လာပါတယ်။ တိကျတဲ့ရှင်းလင်းချက်မရှိ‌ေပမယ့်လည်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေမျှသာရှိတဲ့ ပဟေဠိ‌ေတွကို ကြည့်ရှုဖို စိတ်ဝင်တစားရှိနေကြဆဲပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တိုပေ့ခ်ျကနေ သေချာ…